2018 Jeep Wrangler JL Halo Nalalka, Led Halo Lights for Jeep Wrangler JL
Bogga ugu weyn > Gawaarida Gawaarida Gawaarida > Jeep JL nalka hore ee 2018 +
NIIKO CUSUB NIIKO FUTO WEYN NIIKO FUTO WEYN NIIKO KACSI SIIGO WASMO SIIGO 9
2018 2019 Jeep Wrangler JL Oem Led Nalalka 9 inch Jeep JL Oem Led
9 inch Led Halo Jeep JL Rubicon Nalalka Wrangler JL Iftiinka Markasta
DOT SAE 9 inch Jeep Wrangler JL Halo Nalalka 2018 Led Halo Nalalka loogu talagalay Jeep Wrangler JL 2019
Iftiinka hore waa 9 inch oo haloo laydh ah, wuxuu la yimaadaa 100w 6500lm dogob sare, 30w 1000lm dogob hoose iyo 22w DRL halo cad. Ku habboon 2018 + Jeep Wrangler jl, DOT SAE Emark-9 waa la ansixiyay.
Nalalka hore ee nalalka ayaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo aan boodh lahayn, miridhku qaban karin iyo biyo la’aan Nalalka halo ee dhalaalaya ee loogu talagalay Jeep Wrangler jl, la imow isku xiraha H4 iyo adabtarada H13. Naqshad gaar loo leeyahay oo ay soo saartay Morsun Technology, ayaa ku habboon Jeep Wrangler JL 2018+ aan lahayn qaansooyin. Naqshad gaar ah, UV u adkaysata, tamarta hufan, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, biyuhu, boodhka ka hortagaan, ka hortagga qarxa. Cimri dheer, cimri dheer in ka badan 50000 saacadood.
faahfaahinta of Jeep Wrangler JL Halo Nalalka hore
9 INCH JL HEADLIGHTS - Naqshad gaar ah oo ku habboon Jeep JL (Maaha JK) 2018 2019, beddel ku habboon Jeep JL nalka hore ee asalka.
Iftiiminta sare ee LED-yada waxaa loo isticmaalaa in lagu gaaro isticmaalka tamarta hoose iyo ka-hortagga biyuhu iyo siigada oo aan fiicnayn.
Wuxuu adeegsadaa naqshad cilmiyaysan oo bey'adda u wanaagsan iyadoo la hubinayo dhalaalka iyo yaraynta isticmaalka tamarta.
Nalalka Morsun Led waxaa loogu talagalay inay u adeegsadaan beddelka suuqa kadib ee Jeep Wrangler, nalalkayaga sare ee hogaaminaya ayaa hubinaya in gaarigaaga Jeep Wrangler uu diyaar u yahay wadada iyo waddooyinka. Laydhadhkan korantada ee hormuudka u ah Jeep Wrangler waxaa lagu dhisay muraayad bajaajle ah oo aan biyuhu xirnayn oo IP67 ah, waxaa loo isticmaali karaa deegaanno kala duwan.
Waxaan ku faaneynaa inaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha iyo dhoofinta nalka hore ee laydhadhka tayo sare leh Jeep Wrangler qiimo macquul ah. Iyada oo tayo sare leh Jeep Wrangler ayaa hogaaminayay nalka hore ee guriga macaamiisheennu waxay helayaan wax soo saar iftiin oo tayo sare leh marka la barbar dhigo kuwii asalka ahaa. Intaa waxaa sii dheer, guryaha aluminium ee gaarka ah waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo aan biyuhu ka hortagin, ka-hortagga daxalka iyo kala-baxa kuleylka degdega ah si loo kordhiyo nolosha nalalka hore. Iftiimiyaashayada hore waxay leeyihiin 12 bilood oo damaanad ah taas oo macnaheedu yahay waxaan ku bixin doonnaa adeeggayaga ugu fiican ee muddada damaanadda si aanad waligaa uga baahnayn inaad ka walwasho isticmaalka nalalkayaga.
Loogu talagalay Jeep Wrangler JL 2018-2019
Hoos waxaa ku yaal fiidiyowga MS-GX9 JL oo hogaaminaya laydhadhka hormoon la’aanta ah, fiidiyaha cusub ee halo leh ayaa dhowaan iman doona, laakiin hadda waad daawan kartaa MS-GX9-keena oo aan lahayn muuqaal halo ah marka hore.